Kedu ụzọ kacha mma iji bulie mkpokọta weebụ maka SEO?
Nchịkọta weebụ bụ akụkụ kachasị mkpa nke ọnụnọ gị n'ịntanetị dịka ọ bụ ihe mbụ ndị ahịa gị nwere ike ịhụ mgbe ha na-agbaso ngalaba gị. Ihe ntanetịime weebụ dị ka azụmahịa maka azụmahịa gị. Were ya na ị na-enye ndị ahịa azụmahịa gị na ndị ahịa azụmahịa kaadị na-adịghị mma na nke jọrọ njọ, nke na-adịghị ebu ozi ọ bụla dị mma.
Olee otu ha ga - esi ghọta gị?
O yikarịrị ka ha ga - achọ ịkwụsị mmekọrịta gị na gị. Otu ọnọdụ ahụ nwere ike ime na ebe nrụọrụ weebụ ebe ndị na-eleta gị na ebe nrụọrụ weebụ na-eme mkpebi nke dabara na akụkụ ahụ nke saịtị na ọdịnaya ị na-enye ha. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta saịtị gị dịka onye na-ahụ maka nduzi kachasị ike, otu ajụjụ "Otu esi ebuli saịtị maka SEO" nwere ike ịdọ gị aka ná ntị.
A ga-agwa eziokwu, ọ bụghị onye ọ bụla ga-aza ajụjụ a ma ọ bụghị ndị ọbịa gị, ha na-eme ya n'ụzọ dị iche iche. Iji ghọta ihe ndị ahịa gị nwere ike ịchọrọ, ịkwesịrị ịnweta ngwá ọrụ nchịkọta nhọrọ ziri ezi. Ngwá ọrụ a kwesịrị inye gị ma mma na nnukwu data gbasara ahụmahụ nke onye ọbịa gị. Ya mere, iji meziwanye mkpokọta weebụ gị ma mee ka ọ bụrụ enyi gị, ọ dị mkpa ịghọta ihe mere ndị ọrụ ji abịa na saịtị gị na mbụ.
N'isiokwu a, ị ga-ahụ ụfọdụ atụmatụ bara uru kachasị mma na ụzọ ị ga-esi lelee mmeghachi omume onye nwere ike ịme gị na ntụgharị gị.
Usoro dị irè maka njikarịcha imewe weebụ gị
E nwere usoro ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agwụ agwụ ị ga-atụle mgbe ị na-emepe emepe weebụ gị.Ma, anyị nwere ike ịmata ọdịiche dị atọ dị mkpa nke kwesịrị ịbụ akụkụ nke saịtị ọ bụla:
Oku na-aga agha
Ihe ndị a niile SEO nwere ike ime ka ọrụ njirimara gị nke ọma rụọ ọrụ nke ọma-enyere gị aka izute atụmatụ gị. Na paragraf a, ị ga-achọta ụfọdụ ihe dị mkpa iji mee ka atụmatụ ịmebe gị dịkwuo mma iji nweta ndị ahịa nwere ike ịbawanye ego gị.
O doro anya na ị ga-ebuli usoro nhazi gị nke ọma iji mee ka ọ dị mfe na ịnyagharịa. Mgbe ị na-emezi ihe ị na-eme, na-echebara ndị ọbịa gị na saịtị anya. Dị ka ndị ọrụ, ahụmahụ ahụ bụ ihe dị mkpa Google ranking. Ndị ahịa nwere ike ị ga-enwe ike ịgafe nke ọma na ibe weebụ iji nweta ozi ha chọrọ. Ọ ga-egbochi ndị ọbịa gị ịghara inwe ndidi na belata ọnụego weebụ. Ọzọkwa, a ghaghị ịkwado atụmatụ ihuenyo na njirimara onye ọrụ iji hụ na ndị ọbịa na-enweta ihe dị mfe.
N'ụbọchị ndị a, nchịkọta nhọrọ na-ewu ewu n'etiti webmasters dịka ha na-agbanwe agbanwe. Usoro nhazi ndị a gụnyere usoro mmeghachi omume, 960 Grid system, Bootstrap 3 na ngwaọrụ ndị ọzọ. Usoro ndị a na-eme ka ndị na-emepụta weebụ nwee ike ịmepụta atụmatụ saịtị dị iche iche nke ọma.
Ka Google na-enwe mmasị na weebụsaịtị ma na-ewe ya dịka ọkwa, ịkwesịrị ịmepụta mkpokọta weebụ nke na-anabata niile ngwaọrụ mkpanaaka. A ghaghị imepụta ọdịnaya mkpokọta weebụ dị oke mma iji kwado ihe ndị na-adịghị mma nke nyocha ihuenyo. Ọzọkwa, ịkwesịrị ịhapụ oghere n'etiti bọtịnụ na ọrụ dị na listi iji mee ka ndị ọbịa gị nwee ike ịnyagharịa ebe ị na-esi na fon ha. M na-adụ gị ọdụ ka ị zere ihe ọ bụla e mepụtara na mmapụta dị iche iche na-emeghachi omume dịka ha enweghị ike igosipụta n'ụzọ doro anya na ekwentị mkpanaaka.
Iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị mara mma ma na-eme enyi, ịkwesịrị ịmepụta mkpụrụ akwụkwọ ziri ezi. Jide n'aka na mkpado gị bụ ihe okike ma kwadoro maka ihuenyo ọ bụla. Ma ọ bụghị ya, ọdịnaya gị nwere ike ịdị oke ntakịrị na enweghị ike ịkọwa. Dịka ọmụmaatụ, ederede okwu na ogologo okwu dị mgbagwoju anya usoro ịgụ ihe dịka akwụkwọ ozi na-agwakọta ibe ha. Ọzọkwa, m na-enye ndụmọdụ izere arịrịọ arịrịọ nke mkpụrụ akwụkwọ isi obodo ka o yie ka ọ na-adọrọ ndị na-agụ akwụkwọ mma.
Iji mee ka ndị ọrụ chee banyere ihe dị mkpa na saịtị gị, mechie oghere ọcha. Ọ na-eme ka ndị ọrụ nwee ike ịkwụsị ihe niile anya na nyochaa ọdịnaya gị nke ọma. Site n'iji usoro oghere ọcha mee ihe, ị ga-eme ka ibe gị dị mma. Ọzọkwa, ọ bụ ezigbo usoro ịmepụta ọdịnaya gị na nha ihu dị iche iche.
Chee echiche banyere atụmatụ ụcha njirimara gị. Dị ka agba nwere ike imetụta mmetụta uche gị na onye nwere ike ịnweta, ịkwesịrị iji awọ ndị na-adịghị mma ma zere ọtụtụ ihe na-egbuke egbuke. Mee ka ndị ahịa gị nwee obi ụtọ site na ime ihe na-atọ ụtọ anya na-acha agba. Ọzọkwa, ejirila otutu agba dị ka ọ nwere ike ịdọpụ onye ahịa site na ịzụta.
Nyocha njirimara search bụ akụkụ kachasị dị mkpa nke ntanetị aka ntanetị n'ịntanetị ka ọ na-eweta okporo ụzọ ezubere iche maka ebe nrụọrụ weebụ.
SEO na-enyere aka iji chọpụta ozi dị mkpa ka a gosipụta maka ndị na-ege ntị. Iji melite nkwupụta ikike ma bulite ntughari weebụ, ịkwesịrị imejuputa SEO. Ọ gụnyere iji mkpụrụokwu, edemede, isi okwu, ihe oyiyi, infographics, vidio mgbasa ozi, njikọ n'ime na njikọ ndị ọzọ, nkọwa nchịkọta na ọdịnaya. Ihe a bụ eze, ọ bụkwa nhọrọ kachasị mma ị ga - esi welie ebe nrụọrụ weebụ gị maka SEO.
Iji mee ka bọọlụ ọchụchọ gị na ndị ahịa gị, chọpụta na ị gụnyere ihe kachasị mkpa na ọchụchọ ọchụchọ ụlọ ọrụ gị na ya. Ndị ọrụ ga-achọ ịchọta ozi achọrọ na elele anya mbụ, ọ bụ ya mere ị ga-eji mee ka ọdịnaya dị gị mkpa dị mfe ịchọta. Ibe weebụ gị kwesịrị ịdị mfe iṅomi. Ya mere, ịkwesịrị izere ịṅụ nri na isiokwu ogologo oge. Hụ na ọdịnaya gị dị mma nke ọma ma gụọ ndepụta na ọnụọgụ nọmba, obere paragraf, utu aha, na ndepụta okwu.
Ọzọkwa, ọ dị mkpa ilekwasị anya na nzube mbụ nke saịtị gị. Ịkwesịrị igosi isi ntụziaka nke saịtị gị na ibe ụlọ iji mee ka ndị ọbịa mara ihe saịtị gị na-apụta. Ịkwesịrị ilekwasị anya na ahịa ahịa ụlọ iji jide ndị ọrụ anya ma tinye ha na ịgbaso akwụkwọ ndị ọzọ ka ị matakwuo isiokwu ahụ.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ dị mfe na agbanwe agbanwe. Nhazi ihe omuma di mfe na-eme ka ndi nleta jiri uzo gaa na akwukwo di mfe ma mezie ihe omuma ha. Na ụwa dị ugbu a, ndị ọrụ anaghị achọ iwepụ oge na-achọ ozi achọrọ. Ha ga-achọ ka ọ bụrụ ngwa ngwa ma dị mfe. Ọ bụ ya mere ị ga - eji mee ihe dị mkpa iji hụ ọdịnaya gị ka onye ọ bụla nwere ike ịhụ ya. Ịkwesịrị izere ozi ọ bụla na-adịghị mkpa ma belata nọmba nke ederede na opekempe Source .